Semalt Expert Anopa Nzira Dzakanakisisa Kuti Futa Referral Spam uye Bot Traffic
Wangopinda muchengeti yako yeGoogle Analytics uye wakachengeta darodar.com, kubata, uye nevamwe vasina kukodzera mumutauriri wako wekutumira. Kana, kune rumwe rutivi, wakamboona nyoka yemhuka mumusangano unoenderana.
Oliver King, Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi we Semalt , anotsanangura pano nei kufuta spam kunokosha.
Kune mhando mbiri dze spam dzinovhuvhuta mune yako analytics platforms.
Kutanga, mabhoti anokundikana kushanyira nzvimbo yako. Ndiri kutaura kwavari se "ghost bots". Idzi idzi dzinosvibiswa spam mune mhedziso isinganzwisisiki kubva kune email email, spam, uye mapepa pasi pemotokari yemotokari yako.
Chechipiri, mabhuku anowedzera nzvimbo yako. Ndinovatumidza se "zombie bots", izvo zvinowanzoita kuongororwa kwepamu pamusana pezvinangwa zvavo zvakasiyana.
Ndiani Anoitora uye Nei Ichichiitika?
Ghost bots ndiyo zvinhu zvinoshandisa zvinenge zvisingabhadharwi zvekusangana pamberi peboka revanhu.
Zombie bots inotadza kana kuti inonyangadza mabhodhi bots. Bhosi kana pasina mubvunzo uye huri chikamu chegadziriro yewebhu..
Hapana mhinduro yakakwana kumabhodhi ose (pasina kubatsirwa kweGoogle), asi pane zvimwe zvinhu zvingaita kuti uratidze analytics yako.
Pane chiyero chakakura chekutungamira kwakashata kunopoteredza nyaya iyi. Kushandisa Kurambidzwa Kunoshaniswa Pasi Pemiti hakusi kunyoreswa kuti ishandise spam muchiedza chekuti:
Hakusi urongwa hwose hunosanganisira.
Haisi chete zvakananga.
Inogona kungotamisa kushanyira kune (hakuna) / Kuratidzira kushanyira.
Hazvikubvumiri kutarisa pfungwa dzenhema nemashoko anovimbika.
Kune nzvimbo dzakawanda dzenharaunda (kuverenga vanhu vakavimbika kwazvo) vachiratidza seva-side shanduko dzakasiyana-siyana, semuenzaniso, .htaccess alters. Izvozvowo ndizvo zvinotyisa kufunga.
Pakupedzisira, Google Analytics checkbox ku "Channel inonzi Bots uye Bugs" haipesani nemweya uye zombie bots.
Ghost referrers zvirongwa zvinowanikwa mukuongororwa kusina kumboitika. Bhoti harina kumbobvunzwa chero magwaro kubva mumamiriro ako. Yakatsanangurira chero ruzivo rwaidiwa kuti utumire zvakananga kune yako Google Analytics platform kuburikidza nekugumisa kodeti yekuongororwa nekodhi yeUA code.
Zombie bots inokubvumira kuti uwane mamwe maitiro sezvo achinyatsopindira uye anopa nzvimbo yako. Pachinhu chakanaka chokuti iwe unoda kutarisa se-server-side urongwa, iyi yekudzidzisa maitiro neInMotion Hostingsolid. Kuvadzivirira pane yako system kwete kungowedzera kuchenesa kune yako analytics, zvinogonawo kuderedza kuvhara pane yako sefa.
Kusvikira mhuka dzichigadzirisa imwe nzira, tinosungirirwa tichiita michina iyo inobvisa vazhinji bhodhi kusina kutora zvinyengeri zvinyengeri Source .